February 23, 2021 – Page2– Voice of Myanmar
ကျွန်းလှမြို့မှာ န.စ.အ ကောင်စီက ခန့်အပ်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ အလိုမရှိကြောင်း ဆန္ဒပြ
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃-၂၀၂၁ ဓါတ်ပုံ – ကိုအောင်နိမိတ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကျွန်းလှမြို့မှာ စစ်အာဏာရှင်အလိုမရှိကြောင်းနဲ့ န.စ.အ ကောင်စီက ခန့်အပ်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ အလိုမရှိကြောင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒပြ #VoiceOfMyanmar #VOM #ကျွန်းလှမြို့ #အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေအလိုမရှိ #ဆန္ဒပြ
အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲကို ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဖျာပုံမြို့မှာ ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃-၂၀၂၁ ST ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ NLD ပါတီဝင်တွေ၊ လူထုလူတန်းစားအသီးသီးက ပြည်သူတွေ အင်အားအများအပြားနဲ့ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲကို ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဖျာပုံမြို့မှာ ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ #VoiceOfMyanmar #VOM #ဖျာပုံ #ဆန္ဒပြ
ကုန်သည်လမ်းနဲ့ အောက်ပန်းဆိုးတန်းထောင့်က CDMပါဝင်တဲ့ မြန်မာမီးရထားဝန်ထမ်းတွေရဲ့ သပိတ်စစ်ကြောင်း
Photos-HA #voiceofmyanmar #VOM #မြန်မာ့မီးရထား
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တပ်မတော်ရဲ့ အာဏာသိမ်းမှုကို အပြင်းထန်ဆုံးရှုတ်ချတယ်လို့ ဥရောပသမဂ္ဂ ထုတ်ပြန်
ဥရောပသမဂ္ဂကောင်စီ ၂၇ နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၏ မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေအပေါ် ဆွေးနွေးမှု နိဂုံးချုပ်ရလာဒ်များ(၂၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁) ၁. ဥရောပသမဂ္ဂသည် မြန်မာပြည်မှ ပြည်သူများနှင့်အတူ ရပ်တည်လျက်ရှိပြီး ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၌ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တပ်မတော်၏ အာဏာသိမ်းမှုကို အပြင်းထန်ဆုံးရှုတ်ချပါသည်။ ဥရောပသမဂ္ဂသည် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အရေးအခင်းအား အရှိန်အဟုန်မြင့်တက်လာမှု မရှိစေရန်အတွက် အရေးပေါ် အခြေအနေကို ချက်ခြင်းရပ်တန့်ရန်၊ အရပ်သားအစိုးရ ပြန်လည်ထူထောင်ရန်နှင့် အသစ်ရွေးကောက် တင်မြှောက်ထားသော လွှတ်တော်ကို ဖွင့်လှစ်ရန်တို့ကိုလည်း တောင်းဆိုလိုက်သည်။ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက် ၂၀၂၀ ခုနှစ်က ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနှင့်အညီ ပြုလုပ်ခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အလေးထားလိုက်နာရမည်။ တပ်မတော်သည် မိမိတို့၏ လုပ်ဆောင်မှုကို စွန့်လွှတ်ရမည်။ ၂. ဥရောပသမဂ္ဂသည် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ‌ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အခြားသော ဖမ်းဆီး၊ ချုပ်နှောင်ခံထားရသူများအားလုံးကို…
ဖေဖော်ဝါရီ- ၂၃- ၂၀၂၁ ရှိုင်းအောင်(VOM) မန္တလေးမြို့မှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့ညပိုင်းက ၃၄ လမ်း ၇၉ လမ်းမှာရှိတဲ့ ပရဟိတဓာရီ အသင်းကိုပါ တပ်မတော်သားတွေနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက် “ကျည် (၁၅)ချက် သင့်ပြီး သေဆုံးခဲ့တဲ့ ပရဟိတဓါရီ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်လေးကို ပို့ဆောင်သဂြိုဟ်ခြင်း” အခမ်းအနား ပြုလုပ်ရင်း မြို့အတွင်းကို လှည်လည်ပြီး ဆန္ဒပြနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ကတော့ ၃၄ လမ်း ၇၈× ၇၉ လမ်းနားက ရထားသံလမ်းကို ပိတ်ဆို့ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့တာကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့ညပိုင်းမှာ တပ်မတော်သားတွေနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “စစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးလို့ အော်မှ ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာ မဟုတ်ဘူး ကျနော်တို့တတွေဟာ လက်သုံးချောင်းထောင်ရင်လည်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာပဲ အဲ့လိုဘဲ ယာဉ်တန်းကြီးနဲ့ ကမ္ဘာကို ချပြတာလည်း ကျတော်တို့တတွေက အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကို လုံးဝအလိုမရှိဘူးဆိုတာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာဖြစ်တယ်”…
ပုသိမ်မှာ ကျိန်စာတိုက်ပြီး ဆန္ဒပြ
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃-၂၀၂၁ AA နစအကောင်စီကို ကျိန်စာတိုက်ပွဲတခု ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပုသိမ်မြို့ ရေကြည်ဦးဘုရားရှေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ မူလက ရေကြည်ဦးဘုရားဝန်းအတွင်းမှာ ပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် ဂေါပကအဖွဲ့က ဝင်ခွင့်မပေးတာကြောင့် ဘုရားရှေ့အဝင်ပေါက်မှာပဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ နစအကောင်စီကို ကျိန်စာတိုက်ခဲ့တဲ့အပြင် အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်း အသက်ပေးခဲ့ရသူတွေအတွက် ဆုတောင်းပွဲကိုပါ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ #VoiceOfMyanmar #VOM #ပုသိမ် #ကျိန်စာတိုက် #ရေကြည်ဦးဘုရားရှေ့
တောင်ငူမှာ ဆန္ဒပြပွဲ ဆက်လုပ်ဖြစ်
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ -၂၀၂၁ သတင်း+ဓါတ်ပုံ KS တောင်ငူမှာ နှစ်ငါးလုံးအ ထွေထွေသပိတ်အပြီး ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင် ရေးဆန္ဒ ဖေါ်ထုတ်မှုတွေဆက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆန္ဒ ဖေါ်ထုတ်ပွဲကို CDM လုပ်နေသော ပညာ ရေးဌာနမှ ဆရာ၊ဆရာမများ၊ တောင်ငူတက္ကသိုလ် ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်နှင့် တက္ကကျောင်းသားများ ၊ ပြည်သူများ နှင့် တောင်ငူဂီတချစ်သူများ ပါဝင်ခဲ့ပြီး အင်အား ၁ထောင်ကျော်ခန့်ရှိပါတယ်။ သပိတ်စစ်ကြာင်းတွေဟာ တောင်ငူမြို့တွင်းလှည့်လည် ဆန္ဒ‌ ဖေါ်ထုတ်ခဲ့ပြီး ၊ တောင်ငူတက္ကသိုလ် ဗကသအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေက လမ်းမကျယ်မှာ အထိုင်သပိတ်ပြုလုပ်ပြီး ၁၁ မှာ လူစုခွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ #voiceofmyanmar #VOM #တောင်ငူ
ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအများစုပါဝင်တဲ့ ဒီနေ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ရေဦးမြို့နယ်က ဆန္ဒပြပွဲ
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃-၂၀၂၁ KAL #VoiceOfMyanmar #VOM #ရေဦး #ဆန္ဒပြ
အာဏာရှင်စနစ်ကျဆုံးရေး စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကသာမြို့မှာ နေ့စဉ်မနက် (၉) နာရီတိုင်း မပျက်မကွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃-၂၀၂၁ MM #VoiceOfMyanmar #VOM #ကသာ #ဆန္ဒပြ
၂ ငါးလုံးအလွန် မုံရွာမြို့မှာ ၁၇ ရက်နေ့မြောက်အဖြစ် ဆက်လက် ဆန္ဒပြ
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃-၂၀၂၁ ကိုတိုးကြီး(VOM) စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာမြို့မှာ ၂ ငါးလုံးအလွန် ၁၇ ရက်နေ့မြောက်အဖြစ် အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြတာတွေ ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဆန္ဒပြရာမှာ မုံရွာမြို့ခံ သံဃာတော်တွေက အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်တရားတော်ကို မြို့နေရာအနှံ့ လှည့်လည်ပြီး ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆန္ဒပြ ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်းကလည်း မုံရွာနာရီစင်ရှေ့မှာ ဒီမနက် ၁၀ နာရီကစလို့ ထိုင်သပိတ်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ #VoiceOfMyanmar #VOM #မုံရွာ #ဆန္ဒပြ
ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ကျောင်းသားတွေ၊ ဆရာ ဆရာမတွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ညှိနိူင်းထား
လားရှိုး ကချင်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကို ရဲအင်အား အလုံးအရင်းနဲ့ သေနတ်ဖောက် ဝင်စီး
ဦး၀ဏ္ဏမောင်လွင်နဲ့တွေ့ဆုံမှု အာဏာသိမ်းတာထောက်ခံတဲ့ သဘောမဟုတ်ဘူးလို့ ထိုင်း၀န်ကြီးချုပ်ပြော
ပခုက္ကူမြို့က ကျည်ထိမှန်သေဆုံးသူ ကိုနေလင်းဦးရဲ့ ဈာပန
ဆန္ဒပြပွဲမှာ ရင်ဘတ်ကို ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး သေဆုံးခဲ့တဲ့ ထက်ခေါင်ကျော်ရဲ့ နာရေး
ထားဝယ်မှာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေပစ်သတ်လို့ သေဆုံးသွားသူရဲ့ နာရေးကို ဒီနေ့ပြုလုပ်
CDM လုပ်နေတဲ့ ဒလသင်္ဘောကျင်း ဝန်းထမ်းတွေ ခြိမ်းခြောက်ခံနေရ